ISEMTHETHWENI AID KUNOKWENZEKA INGOZI
ISEMTHETHWENI UNCEDO CAR KUNOKWENZEKA INGOZI
Nowadays izantya eziphezulu kwaye inyusiwe traffic kwi-enkulu izixeko kwaye ngaphandle settlements ngokomthetho amahlwempu umgangatho ezindleleni ngaphezulu, phantse wonke umqhubi ubuncinane kanye uba iqela ukuba kunokwenzeka ingozi ngumsebenzi wabo fault okanye nge-coincidence. Nayiphi na kunokwenzeka ingozi ayiyi kuphela usamuel kwaye uloyiko, kodwa kanjalo umonakalo kwi-health ka-abaqhubi umfanekiso kwaye abahambi ngeenyawo, yethutyana ilahleko ye umthamo we-umqhubi kwaye considerable imathiriyali umonakalo imoto.
Umatshini umonakalo kukhokelela ilahleko ye kuthetha ka-ezibanzi zezothutho kuba umsebenzi kwaye nokugcina usapho car umnini. Deprivation ka-iphepha-mvume lokuqhuba kuba umqhubi, oku uninzi buhlungu isohlwayo kuba ukwaphulwa komthetho traffic imithetho. Ke ngoko, phantse wonke kunjalo, neengozi kufuneka uncedo i lawyer kuba isithuthi kunokwenzeka ingozi.
Kuqeshwe lawyer iya kuba versed kwi kunokwenzeka ingozi kwaye ukusombulula ingxaki yakho ukuthandwa
Funda i-umntu lawyer kuba car kunokwenzeka ingozi ulindeleke ukuba phantse ngoko nangoko emva siganeko, kungakhathaliseki nokuba ngaba inqununu perpetrator okanye victim kwi-kunokwenzeka ingozi. I-knowledgeable abaqondisi-mthetho ngomhla traffic kunokwenzeka ingozi Ibhodi abaqondisi-mthetho kuba kofakwano amava kule ndawo, umthetho kwaye uza kukwazi ukusombulula nayiphi na imbambano malunga traffic kwiimeko yakho ukuthandwa. Kuqeshwe lawyer kunokwenzeka ingozi lugqiba yonke imibuzo ngoko nangoko, esenza exclusively kwi-isemthethweni entsimini.Ngokukhawuleza emva umxhasi u-ngu-studying ingxelo ngokulinganayo
phezulu nge amapolisa amagosa, liphakamisa i-inshorensi uxwebhu kwaye collects kwamaxwebhu afunekayo.